बलात्कारी पुरुषको ‘लिङ्ग’ काट्ने भए बलात्कारी महिलाको के काट्ने ? – Vision Khabar
। ५ भाद्र २०७५, मंगलवार २३:१३ मा प्रकाशित
गत वर्ष डोटी जिल्लाको एक गाउँमा एक जना समलिङ्गी पुरुषलाई स्थानीय २ जना महिलाले जवरजस्ती करणी नै गरे । ती पुरुषलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो पारेर यातनाका दिदै दुव्र्यवहार गरेको कुरा ब्लुडाइमण्ड सोसाइटीको अफिसमा ती समलिङ्गी पुरुषले आफ्ना बेदना पोखे । फेरि यो कुरा अरुलाई भनेमा ‘तँलाई झनै बेज्जत गर्छौं घाँणे’ जस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै धम्की, यातना पनि दिए ति महिलाले । ती पीडित पनि समाज तथा साथीभाईमा त्यस्ता कुरा गर्दा उल्टै तिरस्कृत हुने डरले त्यो कुरै निकाल्न सकेनन्।
त्यस्तो घटनाक्रम ३÷४ पटक दोहोरियो तिनै पीडक महिलाबाट । समाजमा ‘पुरुष बलिया महिला कमजोर’ भन्ने भ्रम मात्र रहेको ती पीडित पुरुषले बताएका थिए। त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। केही वर्ष अगाडि कञ्चन शर्मा रेग्मी र उनका श्रीमान् मोहन रेग्मीको काहानी सामाजिक सञ्जालदेखि देश विदेश गल्ली गल्लीमा पनि भाइरल बनेको थियो । त्यो घटनामा मोहन रेग्मी स्वयंले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘मैले नचाँहादा नचाँहादै कञ्चनबाट पटक पटक बलात्कारको सिकार हुँदै आएको थिए ।’ कञ्चनले जवरजस्ती गरेर बेज्जत हुने डरले बाध्य भएर स्वीकार्नु परेको उनले बताएका थिए।
केही दिन अघि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै अर्धनग्न प्रदर्शनमा जुटेका २० जना महिलाहरु र उनका सहयोगीहरुको एउटै माग थियो बलात्कारी पुरुषलाई फाँसी दिइयोेस् तर बलात्कारी महिलालाई भने फाँसी दिनुपर्ने कसैको आवाज निस्केको थिएन। बलात्कारी पुरुषहरुको लिङ्ग काटेर बलात्कार नियन्त्रण आउँछ भन्ने बुझाई महिला अधिकारकर्मीको छ । त्यस्तै माग राख्दै प्रदर्शनमा जुटेका छन्। तर बलात्कारी पुरुषको लिङ्ग काट्ने भए बलात्कारी महिलाको के काट्ने ? महिलाबाट बलात्कृत हुने पुरुषहरुलाई कसरी न्याय दिलाउने ? पीडित पुरुषले पनि महिलालाई सजायको माग त गरेकै होलान्।
कानून त सबैलाई लाग्नु पर्छ। कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन्। त्यसैले महिला दिदी बहिनीहरु सबैलाई लागू हुने, सबै अपराधीलाई बराबर सजाय हुने कानून बनाउन माग गरौं। फाँसी नै दिने भए त्यसले कुनै अपराध निर्मुल हुँदैन्। माइतीघरको प्रदर्शनमा महिलालाई पनि फाँसीको माग गरेमा कतिपय महिलालाई त त्यो सजाय आफूले पनि भोग्नु पर्ने जस्तो लागेको थियो होला सायद । त्यसैले पीडक महिलालाई फाँसीको कुरा नै आएन। एक जना महिला अधिकारकर्मीले त भनेकी थिइन्, ‘पुरुषहरु बलात्कार भएकै छैनन्, बलात्कार भएका भए त बाहिर गुनासो गर्थे होलान्।’ उनको यो भनाईले बोल्न सक्नेहरु मात्र पीडित रहेछन् भन्ने बुझाउँछ।
सामाजिक संस्कार अनुसार पनि पुरुष आफ्नै बेज्जत हुने डरले यस्ता कुराहरु बाहिर ल्याउँदैनन््। आफू महिलाबाट बलात्कार भएको भनेर । तर महिलाको त्यसो हुँदैन् बिस्तार बिस्तारै आफ्ना कुराहरु खोलेरै छोड्छन् अधिकाशं पीडितहरु । त्यो राम्रो कुरा पनि हो।
विश्वका शीर्ष देशहरु क्रमशः अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, स्वीडेन, भारत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, श्रीलंका, इथियोपिया गरी १० वटा देशहरुमा सबैभन्दा बढी बलात्कारका घटनाहरु बाहिरिने देश हुन्। तर त्यी देशहरुमा पनि फाँसीको व्यवस्था छैन्। तिनीहरुलाई सुधार केन्द्रमा राखेर केही समयमा पुर्नः निर्माणमा लगाइने गरिन्छ। जसले गर्दा ती देशहरु विकास निर्माणमा अब्बल बन्दै आएका हुन्। त्यो सिकाई हामीले पनि सिक्ने की ?